iverizon ivala iivenkile ezizezenkampani; abanye abathengisi abagunyazisiweyo bahlala bevulekile
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IVerizon ivala iivenkile ezizezenkampani; abanye abathengisi abagunyazisiweyo bahlala bevulekile
Oyena mqhubi mkhulu ngaphandle kwamacingo eUnited States, eVerizon, uvala ezinye zevenkile zayo ukuphendula kwi-coronavirus esasazeka ngokukhawuleza. Inkampani ayiboneleli ngoluhlu lweevenkile ezizezenkampani ezihlala zivulekile. Ungaya kwiwebhusayithi yeVerizon & apos; , punch kwi-zip khowudi yakho, kwaye ufumane ukuba zeziphi iindawo ezisasebenza. Kwisixeko sasePembroke Pines, eFlorida, zonke iivenkile ezizezenkampani zivaliwe ngelixa abathengisi abaninzi abagunyazisiweyo beVerizon bevulekele ishishini. Into efanayo iyasebenza nakwiivenkile zaseVerizon kwisiXeko saseNew York, kwaye, kwilizwe lonke.
UVerizon uthi abasebenzi bakhe abathengisayo baya kusebenza ekhaya benceda abathengi kwi-intanethi (ngencoko yexesha lokwenyani) nangefowuni. Ngabantu abaninzi kumazwe bexelelwa ukuba basebenze ekhaya, umphathi uphethe ulwandiso olukhulu lwezithuthi ezingenazingcingo kwaye uphakamise okwethutyana iifizi kunye neefowuni. Iverizon, kunye ne-AT & T, T-Mobile, kunye ne-Sprint, Utyikitye isibhambathiso sokugcina amaMelika aseMelika ; kude kube ngoMeyi 13, abasebenza ngaphandle kwamacingo bathembisa ukungazibandisi iiakhawunti zabathengi kunye namashishini amancinci angakwaziyo ukuhlawula amatyala abo. Imirhumo yamva iphakanyisiwe yeentsuku ezingama-60 kwaye iindawo zeWi-Fi zenziwa zifumaneke kubo bonke.
Iziganeko ezininzi ezinxulumene nomzi mveliso wefowuni ziye zahanjiswa kwi-Intanethi ezinje ngeGoogle kunye neApple neenkomfa zonyaka zabaphuhlisi. IGoogle I / O bekufanele ukuba ibanjwe ukusukela nge-12 kaMeyi ukuya kwi-14 kaMeyi kwi-Mountain View ngelixa i-Apple kunye ne-WWDC ngokwesiko ibibanjwa ekuqaleni kukaJuni. I-Facebook nayo i-86 & apos; d yayo yonjineli yonyaka confab. Kwangoko kulo nyaka, i-Mobile World Congress (MWC) e-Barcelona yarhoxiswa inyanzelisa abenzi beefowuni abaninzi ukuba bakucothise ukwaziswa kwezixhobo ezitsha.
Umphathi weVerizon uHans Vestberg ubhale ileta ebishicilelwe kwiwebhusayithi yenkampani. Isigqeba sibhale, 'Ngeli xesha lobhubhane sonke siyakhuthazwa ukuba siziqhelanise nokuhambahamba kwezentlalo ukunciphisa ukusasazeka kunye nokwenza igophe. Kwiveki ephelileyo, similisele iqhinga lokusebenzela ekhaya kwaye ngoku siyalandisa ngokukhawuleza ukuba libandakanye amalungu eqela lethu. Njengenxalenye yesigaba sethu esilandelayo, sinciphisa inani leevenkile zeVerizon ezihlala zivulekile. Nangona kunjalo, abathengi bethu banokufumana inkxaso kunye neenkonzo abazifunayo 24/7 ngokundwendwela verizonwireless.com/support/, ukubiza 800.922.0204 okanye ukusebenzisa i-MyVerizon app. '
yongeza imihla yokuzalwa kwikhalenda kaGoogle
lg g2 vs htc enye m8
Fumana iprojekti yasimahla ye-LG MiniBeam kunye ne-B & O BEOPLAY H3 yentloko xa uthenga i-LG G6 okanye i-V20
Ingxelo yeBhash ukuba-Else inemizekelo
I-Apple kunye neapos; s Mini mini (2019) iyathengiswa ngexabiso layo eliMnyama ngoLwesihlanu 2020
I-Samsung Galaxy S5 yeVerizon kunye ne-AT & T zendele; $ 18,000 yexabiso lokuqokelela?
Imicimbi kaGoogle Pixel 5, amaxabiso orhwebo kunye nokufumaneka eVerizon, T-Mobile, AT & T, kunye nokuThenga ngokuBalaseleyo
Uyenza njani i-GIF kwi-Samsung & apos; s S10, S10 Plus okanye S10e ngaphandle kokukhuphela naziphi na ii -apps